Utsanana Uye Kuchena Patsika Nepakunamata | Zvinotaura Bhaibheri
Ndakanyaradzwa Panguva Chaiyo
Mwari anoona sei nyaya dzoutsanana?
“Ngatizvichenesei pazvinhu zvose zvinosvibisa nyama nomudzimu.”—2 VaKorinde 7:1.
Musiki wedu anotida uye anoda kuti tirarame kwenguva yakareba tiine utano hwakanaka. Mwari anoti, “Mwoyo wako ngauchengete mirayiro yangu, nokuti uchawedzerwa mazuva mazhinji nemakore oupenyu norugare.” (Zvirevo 3:1, 2) Kuda vanhu kunoita Mwari kunoonekwa mumirayiro yaakapa vaIsraeri yaisanganisira zvavaifanira kuita kuti vachengetedze utsanana. (Dheuteronomio 23:12-14) Pavaiteerera mirayiro yacho, vairarama vaine utano hwakanaka uye vaidzivirirwa pazvirwere. Dzimwe nyika dzakadai seIjipiti dzakanga dzisina mirayiro yakafanana neiyi saka dzaigara dzichioneswa ndondo nezvirwere.—Dheuteronomio 7:12, 15.
Mazuva anowo, vanhu vasingasvuti, vasinganwisi doro uye vasingashandisi madhiragi “vanozvichenesa pazvinhu zvose zvinosvibisa nyama,” zvoita kuti vaderedze mikana yokurwara uye havazodimburiri upenyu panzira. Kunyatsoteerera mitemo yaMwari youtsanana kunoratidza kuti tinodawo vamwe.—Mako 12:30, 31.
Mwari anoona sei tsika uye manamatiro akachena?
“Urayai nhengo dzemiviri yenyu . . . kana tichitaura nezvoufeve, zvinhu zvisina kuchena, chido chokurara nomumwe munhu, kuchiva kunokuvadza, nokuchochora uko kunoreva kunamata zvidhori. Hasha dzaMwari dziri kuuya nokuda kwezvinhu izvozvo.”—VaKorose 3:5, 6.
Sezvambotaurwa, Bhaibheri rinotikurudzira “kuzvichenesa pazvinhu zvose zvinosvibisa nyama nomudzimu.” Jesu Kristu paaiva pano panyika, vanhu vakawanda kusanganisira vatungamiriri vechitendero chechiJudha vainyanyisa panyaya dzoutsanana asi vachiregeredza nyaya dzokunamata nedzetsika. (Mako 7:1-5) Jesu akaratidza kuti maonero ari pakati nepakati ndeapi paakati: ‘Hapana chinhu chinobva kunze chinopinda mumunhu chinogona kumusvibisa, sezvo chichipinda muura hwake, chobudira mugomba retsvina.’ Akabva awedzera kuti: ‘Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu; nokuti mukati, mumwoyo mevanhu, munobuda kufunga kunokuvadza: ufeve, umbavha, umhondi, upombwe, kuchochora, mabasa akaipa, unyengeri, kusazvibata, ziso rine shanje, uye upenzi. Zvinhu zvose izvi zvakaipa zvinosvibisa munhu.’—Mako 7:18-23.
Kubva pane zvakataurwa naJesu, vaya vanonyanya kukoshesa utsanana asi vasina hanya nemitemo yaMwari vakafanana nemakapu akachena nechokunze asi akasviba mukati.—Mateu 23:25, 26.
Mitemo yemuBhaibheri iri nyore kuteerera here?
Pana Mika 6:8 panoti: ‘Jehovha anodei kwauri kunze kwokuti ururamisire, ude mutsa uye uve nomwero pakufamba naMwari wako!’ Kuita izvi kunganzi kwakaoma here? Uyezve, Musiki wedu anoda kuti timuteerere nechikonzero chokuti tinomuda. Tinofara chaizvo kana tikaita izvi. (Pisarema 40:8) Patinenge takanganisa, tinonyaradzwa nokuziva kuti Mwari ane ngoni. “Sezvinoita baba vanonzwira ngoni vanakomana vavo, Jehovha akanzwira ngoni vaya vanomutya. Nokuti iye anonyatsoziva maumbirwo atakaitwa, achiyeuka kuti tiri guruva,” kureva kuti tiri vanhu vane chivi.—Pisarema 103:13, 14.
Saka, mitemo yaMwari yokuti tive noutsanana uye tive netsika nemanamatiro zvakachena inoratidza kuti Mwari akanaka uye anotida. Kuteerera kwatinoita mitemo iyi nomwoyo wose kunoratidza kuti tinomuda uye takachenjera.
Bhaibheri haritombotauri nezvefodya, saka tingaziva sei?
Bhaibheri Rinochinja Upenyu—October 2012
Vanhu vaviri vakarega sei zvakaipa, zvaisanganisira kunwa doro nezvimwe zvinodhaka, vachibva vawana mufaro wechokwadi?